Myanmar Vs Oman Football Match on 29 July 2011 | Myanmar Celebrity Gossip & News
Myanmar Vs Oman Football Match on 29 July 2011
Myanmar VS Oman Soccer Match Interrupted by Burmese Hooligans
Video of Htootayzar.com!!! Video on Youtube!!
Yangon, Myanmar - 29 July 2011 -- 2014 World Cup (Brazil) Qualifier match between Myanmar and Oman was interrupted by crowd with violence at Thuwana Youth Stadium, Yangon, Myanmar Today evening. Match was 2nd leg for the World Cup qualification. First match was played at Oman with result Oman2-0Myanmar and this is the second leg at Myanmar. Oman was leading with2-0until 40 minutes before crowd getting violence. Fans threw water bottles, stones, slippers, lighter onto the pitch and players. Even though police and Myanmar Soccer Chief, Zaw Zaw tried to calm, fans are still throwing.
Later both teams decided to stop the game according to FIFA rules. According to some sources, Oman has been declared as the winner and progress to the third-round group stage. Myanmar could be face action from FIFA for the violence. This is the video I recorded and witnessed asaphotojournalist (media). Reporting from Yangon, Myanmar.
Video from Htoo Tay Zar's Vimeo Channel. www.vimeo.com/tayzar44
UnknownJuly 28, 2011 at 10:44 PMရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။။။။ReplyDeleteshweJuly 28, 2011 at 11:13 PMvery very shameful for Myanmar people.ReplyDeleteDreamCreatorJuly 29, 2011 at 12:57 AMသြော် မြန်မာမြန်မာ ... ရချင်လိုက်တဲ့အောင် မြင်မှု ဖြစ်ချင်လိုက်တဲ့ အကောင်းဆုံးတွေ နှိမ်ရင်လည်း မခံ ..... သခင်မျိုးဟေ့ဒို့ဗမာဆိုပဲ ... ဒီကနေ့ခေတ် လုပ်ရပ်တွေက ဒို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်ကို ချစ်ရာမကျပဲ နှစ် ရာကျနေပြီ ကိုယ့်လူတို့ရေ သတိလေး လည်းထား ကြဦး ... နိုင် ငံတကာမှာ မြန်မာဆို အနှိမ် ခံရတယ်ဆို တာဒီလိုစောက်ကျင့် တွေ အောက်တန်းကျလို့ မြန်မာ ပတ်စပို့ဆိုရင် အာဖရိက လူရိုင်းတွေလောက် တောင်အခွင့်အရေး မရဘူး .. ရှက်တယ်ပြောရ တာလဲ မောလှပါပြီ ... တချိန်က ဦးသန့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ... အစချီပြီး အမေစုတို့နဲ့ ဂုဏ်ယူခဲ့ ရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဘဝ ဒီဘဝဒီမျှသာရှိပါစေတော့ ... ရှက်တယ် စောက်ကျိုးနဲ ရှက်တယ် ပိုးစိုးပက်စက် ရှက်တယ်ကွာReplyDeleteDreamCreatorJuly 29, 2011 at 1:08 AMကိုယ့်လူမျိုးလုပ်ရပ်က ပွဲမစခင်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း ကိုလူရှေ့သူရှေ့ (နိုင်ငံတကာ ရှေ့) ခေါ်ထုတ်ပြီး စောက်ရှက်ခွဲလိုက်သလိုပဲ .. ယဉ်ကျေးလှတဲ့ တို့မြန်မာရယ် ... ကိုယ့်မိဘကိုယ် လမ်းမထွက်ပြီး ကော်ဆဲသလိုပါ ပဲလား ... ကိုယ်ဟာကိုယ်ဘာလုပ် မိသလဲ သတိထားမိကြရဲ့လားဗျာReplyDeleteBaby rapperJuly 29, 2011 at 3:03 AMshet lite tar byar :((ReplyDeletemickymyoJuly 29, 2011 at 3:36 AMdar pal lay myanmar so dar...dee lo lote ma myanmar pee tha mar pop ...hote wo larReplyDeletechitJuly 29, 2011 at 6:14 AMမြန်မာအားကစားကမ္ဘာကိုစောက်ရှက်ကွဲစေသည်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ ကွာReplyDeletewritterJuly 29, 2011 at 8:18 AMကောင်းတာပေါ့။ မနိုင်တဲ့အတူတူ။ နောင်ကျမြန်မာ ဆိုလာမကန်ရဲတော့ဘူး။ ဘောလုံးသမားတွေက ဘယ်ပွဲကန်ကန် မှမနိုင်တာ။ နိုင်ချင်ပြည်သူကမခံနိုင်လို့ဆော်ကျတာလေ။ မြန်မာပတ်စပို့နှင့်တော့ ကိုင်မပေါက်ပါနှင့်။ ကိုတော်နေရင် ဘာပတ်စပို့ကိုင်ကိုင်ပေါ့။ ကိုထက်နိမ့်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲ (ဘင်္ဂလား)။ bus car ပေါ်အဖွားကြီးတွေတက်လာရင် ဖယ်ပေးတဲ့နိုင်ငံဘယ်မှာရှိလဲ။ တောင်းတွေ၊အထုပ်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံသူတွေကူသယ်ပေးတာမြင်ဘုးလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံပဲရှိတာ။ Singapore MRT ကန့်သတ်ထိုင်ခုံတွေမှာတောင် ထိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေ အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီတွေတက်လာရ င်တောင်ဖယ်ပေးရကောင်းမှန်းမသိကျဘူး။ ယဉ်ကျေးတယ်၊မယဉ်ကျေးတာက ဘောပွဲနှင့်မဆိုင်ပါဘူးဗျာ။ReplyDeleteaung khant kyawJuly 29, 2011 at 10:40 AMမြန်မာ့ အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်း၇မည်.ဆိုတာဒါလားReplyDeleteNurseJuly 29, 2011 at 7:32 PMဘောလုံးပွဲ ပရိတ်သတ်အတွင်းမှာ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ စွမ်းအားရှင် အများအပြား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်..သူတို့ဟာ သောက်စားထဲတဲ့အတွက် မူးယစ်နေကြကြောင်း ထိုကိစ္စဟာအခုလို မငြိမ်မသက် ဖြစ်မှုရဲ့ အကြောင်းအရင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်ReplyDeleteuss4July 29, 2011 at 7:51 PMI love Myanmar very much..I maMyanmar Very proud citizen & nationBut ..! Now I say bullshit who are the bad fan..very shame for Myanmar footballReplyDeletenu aungJuly 30, 2011 at 12:22 AMစောက်ကျင့်လေးတွေပြင်၇အောင်........တစ်ခါတစ်ခါမြန်မာပြည်သားဖြစ်၇တာတောင်၇ှက်မိသလိုဘဲ......ဒီလိုတွေကြောင့်ပေါ့....ကမ္ဘာမှာမြန်မာဆို၇င်နှိမ်ခံနေ၇တာထုံးစံလိုဖြစ်နေတာ..............ReplyDeleteRrJuly 30, 2011 at 1:50 AMthis is Myanmar, only one country and the rudest country all over the world. Myanmar government, than shwe beat the monks, now Myanmar citizen show their rude behaviour.No need to wonder for this eventReplyDeleteformularJuly 30, 2011 at 4:55 AMမြန်မာပြည်မှာကောင်တဲ့လူရှိသလိုမကောင်းတဲ့လူလည်း၇ှိတာပဲ အဓိကကကိုယ်တိုင် ကောင်းအောင် နေဖိုပဲ လိုပါ တယ်ReplyDeleteKOGYIKYAWJuly 30, 2011 at 7:04 AMစည်းမရှိကမ်းမရှိကောင်တွေကြောင့် မြန်မာဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ သိက္ခာကျနေရတာပါ..အခုအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရတာဟာ အင်မတန်မှကိုရှက်စရာကောင်းပါတယ်..အခုလက်ရှိတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဖိဖိစီးစီးနဲ့ ရမ်းကားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းပြီးအရေးယူသင့်ပါတယ်..ဒီလိုမှမလုပ်ရင်နောက်နောင်မြန်မာကိုလာပြီးဘောလုံးကစားတဲ့သူ ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်..ReplyDelete1ya9110July 30, 2011 at 8:15 AMဘယ်သူမဆို ကိုယ့်အသင်းကို နိုင်ချင်ကြတာပါဘဲ။ မနိုင်ဘဲရှူံးမဲ မည်းတာ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ လာကန်တဲ့ တခြားနိုင်ငံက ဧည့်သည်တွေ ကိုတော့ ဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ ဒီလိုသွားလုပ်တော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာ ကလူတွေအထင်သေးတာပေါ့ဗျာ။အထူးသဖြင့် လုံခြုံရေးတွေ တင်းကျပ်မှု့မရှိလို ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့အမြင် ကိုပြောတာနော်။ ပွဲကိုတောင်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်အရေးပါတဲ့လူက လောင်းကြေးထပ်ထားသလဲမသိဘူး။ ဒီလိုလုံခြုံရေးမျိုးနဲ့ နောက်ဆို ဘယ်နိုင်ငံမှ မြန်မာပြည် လာကန်ရဲမယ် လို့မထင်ဘူး။ ကိုယ့်မျိူးကိုယ်ချစ်ရင် အယောက်တိုင်း ကိုယ်စီရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပြင်သင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျာ။ReplyDeleteiROFLMAOJuly 30, 2011 at 3:34 PMSimple solution. put the price up to 30,000 kyats.I dont know how much they charge. may beafew thousands? good for myanmar sport association + already filter low class people.ReplyDeleteiROFLMAOJuly 30, 2011 at 3:41 PMNext we will see ministers fighting in parliament. arguing this and that.i've seen india and taiwa minsters fighting in parliamnet.i think we asia ppl cant get along with democracy.coz we used to King and queen. love to stay under dictatorship kind of system.ReplyDeleteAmandaJuly 30, 2011 at 4:00 PM@writter i lived in Japan and currently Living in US there are stillalot of people in the world who are polite and have respect for elders and help other people. I take subway everyday here and people will give seats to elders, sick persons, pregnant women and women with small children. So obviously Myanmar is not the only country. anyway when it come to football games Myanmar fans are really classless. I watched Myanmar league game in yangon and the fans brought sticks, bricks, rocks plastic bottles and throw at the opposing team players whenever they get closer to sideline and my friend and i went to mandalay and my friend was wearing YGN Utd shirt. we were just sitting atatea shop and drinking tea and all of the sudden4or5people come near us and say "fuck you yangon". so we pay for tea and left as fast as we can. so you can see myanmar fans are really rude and out of control. they don't even respect other myanmar football fans. some England fans and Argentina fans are like that too. but compare to fans all around the world, myanmar fans are really bad, even african fans act better than myanmar. If myanmar want respect all around the world, we should start acting with class even if it isafootball game.ReplyDeletewritterJuly 31, 2011 at 12:10 AM@Amanda ရေဟုတ်မှာပေါ့။ ခင်ဗျားက Japanရော၊ US မှာနေလာတော့ဟုတ်မှာပေါ့။ ကျနော်က တော့ ပုဇွန်တောင်အမှိုက်ပုံမှာနေရတာဗျ။ စင်ကာပူကိစတောင် သူများပြောတာကြားဘူးတာဗျ။ နောက်မသိရင်မရေးတော့ပါဘူးနော်။ ဘိုလိုတော့မရေးပါနှင့်ဗျ။ ကျနော်တို့လို လူပိန်းတွေနားမလည်ဘူးဗျ။ReplyDeletematt.thuJuly 31, 2011 at 4:40 AMI love Myanmar and proud of my country for General Aung San, U thant and Daw Aung San Suu Kyi etc. I also like Burmese ppl who are helping to each other and kindness but we have some bad attitude as like this supporting this football match and if we want to success we have to play well and support fair. If the whole world watch this football match we are shameful. So sorry for that.ReplyDeleteminAugust 1, 2011 at 5:08 AMစည်းကမ်းမ၇ှိဘူး ၊ အောက်တန်းကျတယ် ၊ နိုင်ငံကိုအ၇ှက်ခွဲတယ် လို့ပြောချင်လည်း ပြောကြပါ။ ဒါပေမယ့် ... ဒါပေမယ့်.....မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ အော်ပြော၇မှာတောင် ခက်နေတဲ့ ခုလိုအချိန်မှာ .. ဘောလုံးကွင်းထဲက ... ကိစ္စတွေကိုတော့မပြောချင်တော့ဘူး။ တို့မြန်မာပြည်သူတွေ ၇ိုင်းစိုင်းလာကြတယ်လို့ ပြော၇င် မှန်တယ် ။ ၀န်ခံတယ်။ သူသူငါငါ ၇ိုင်းလာကြတယ် ။ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ ...နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ် မင်းလုပ် .. တ၇ားတာ မတ၇ားတာ .. လိမ်တာမလိမ်တာ မသိ.... အုပ်ချုပ်တာခံခဲ့၇လို့ဘဲ ..မြန်မာလူမျိုးဟာ ဟိုးေ၇ှေ၇ှတုန်းက လို မယဉ်ကျေးတော့ဘူး .. အဖေလုပ်တဲ့ သူက သူခိုး၊ လူလိမ်၊ ဖြစ်မှတော့ သားတွေမကောင်းတာ မပြောနဲ့ ။ ပြည်သူတွေ ကို လိမ်မာစေချင်၇င် ... အားလုံးလေးစားအောင် လုပ်ပြ ။ တ၇ားဥပဒေကို လေးစားပြ ။ ဒါဆို တဖြေးဖြေးချင်း ကောင်းလာကြမယ်။ အုပ်ချုပ်သူကတောင် လေးစားစ၇ာမ၇ှိ အ၇ှက်မ၇ှိနေမှတော့ ..... .နောက်ဆို ပိုဆိုးဖို့ဘဲ ၇ှိတော့မယ် .....အားလုံးကို လေးစားပါတယ် ။ ပြည်သူတွေကို ချစ်ပါတယ် ။ReplyDeletethutawAugust 1, 2011 at 11:49 AMတော်တော်ကိုတော့ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်....ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်..မြန်မာဟာအခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မျက်နှာမပြရဲဖြစ်နေရတဲ့အထဲ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ပိုဆိုးပါတယ်...ဒါပေမဲ့အားတော့မငယ်ပါဘူး မြန်မာလူမျိုးဟာမြန်မာလူမျိူးပါပဲ သူများတွေလိုတော့မျိုးမစစ်မြစ်မတွယ်တာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာနဲ့ အခိုင်အမာရှိပြီးသာ လူမျိုးတွေပါ..ဒါကိုပဲမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာရှက်သလေးဘာလေးနဲ့ ပြောနေလိုက်ကြတာ..သူတို့ချက်ထည်းကရွံ့ ကိုခြေမနဲ့ကော်ထုတ်ရင်တောင်အတောင့်လိုက်ထွက်ပါသေးတယ်ဒါကိုသူတို့က သွေးနထင်ရောက်နေသလားမပြောတတ်ပါဘူး...ထားပါဒါတွေပြောဖို့ကအရေးမကြီးပါဘူး..မြန်မာပြည်ထဲက ကိုယ့်မျိုးချစ်ပြည်သူတွေကိုပဲ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် နောက်နောင်ဒီလိုမျိုး လုပ်ရပ်တွေကိုမပြုလုပ်ကြဖို့က မြန်မာပြည်သူတိုင်းရဲတာဝန်ဖြစ်ပါတယ် ဒါလေးကိုတော့ လက်ခံပေးစေချင်ပါတယ်...မြန်မာပြည်သား လူရမ်းကားလို့တော့အမည်မတွင် ပါရစေနဲ့ဗျာ...စိတ်ကောင်း ချမ်းသာ ကျန်းမာစွာရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း...မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့..သူတော်ReplyDeleteTar ZanAugust 1, 2011 at 12:52 PMတရားမမျှတမလွပ်လပ်ချင်းမသွေ ဒို့ပြေဒို့မြေများလူခပ်သိမ်းမငြိမ်းချမ်းစေဖို့ခွင်.တူမညီမျှဝါဒမဖြူစဉ်တဲ့မြေဒို့ပြေဒို့မြေပြည်ထောင်စုအမွေအမြဲတည်တံ့စေဖို့လက်နက်တွေနဲ့အခွင့်အာဏာကိုဆက်ထိမ်းသိမ်းပါစို့လေ။စာကြွင်း..... တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ.လူကြီးမင်းများ လိုတရဆုနဲ.ပြည့်စုံကြပါစေတာဇံကတော.တောမှာပဲနေတော့တယ်။ReplyDeleteiROFLMAOAugust 1, 2011 at 3:00 PMHa ha my guess was right.According to Irrawady.com >> It was free entry for Normal seat. they dont event chargeacent. and this is what you got. i hope MNL learn the lesson.If u offer free next time, they will fuck you. Money is the best way to filter out low class ppl.Now have to pay big fine to FIFA. by FiFa rules, 1 object found ondfield is 5000 dollars. LOLhttp://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6967-2011-08-01-10-58-01ReplyDeleteTar ZanAugust 1, 2011 at 6:55 PMရှေ.တန်းကမကောင်းနောက်တန်းကမစွံအလယ်တန်းကညံ့နဲ.ဘောကလုံးနေတယ်ဆိုပေမယ့်ဗမာအသင်းဘယ်ပြည်ကအသင်းနဲ.ကန်ကန်အစဉ်လာအရရှုံးစမြဲပဲလေလူဦးရေသန်း၅၀ကျော်ထဲမှာမလူ၂၀လောက်ရွေးပြီးကန်ကာမသူ့လူကိုယ့်ဘက်သားကိုအတင်းထိုးထဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကြပြန်တော့........သွပ်...သွပ်...သွပ်....ReplyDeletelynnAugust 1, 2011 at 11:06 PM@writter. Agree with Amanda. You should better study before making comment where's the myanmar level. And, I was amazed in your point comparing with bangladesh that nothing have to say. You'd better study bangla's education and infrastructure. Moreover, currently our lovely country (myanmar) is not much have to say at least in south east asian level.And, nothing have to proud asamyanmar people except beingabuddhism.ReplyDeletehttp://mhlnk.com/43C90220August 2, 2011 at 5:20 PMမိုက်တယ် ...မိုက်တယ် ......ငမိုက်ကောင်းတွေReplyDeleterobinAugust 10, 2011 at 5:34 AMi was there. but i didnt throw anything..feel so angry and so sad. Oman is better than us.ReplyDeleteThang ThangAugust 11, 2011 at 6:45 PMWe need to learn how to accept things. Oman is better than us we have to accept that and what we have to do is make ourself better than Oman later in the future. I am very (totally) disappointing on my people who made the game ugly. But hoppfully we learned from what we did (mistakes).ReplyDeleteSaw-GAugust 18, 2011 at 5:25 AMကျတော်ကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မမြင်ဘူးကျတော်တို့လူမျိုးတွေ ဆိုးကြပေကြတာ လူတိုင်းသိနေတာပဲ အပြစ်ဆိုပေမဲ့ ဒီလိုပဲနေလာကြရတာဆိုတော ရွှေတော်တော်များများကတော့အပြစ်လို့ကိုမမြင်တော့ပါဘူး ကြာတော့လည်း တကယ့်အမှန်တရားဖြစ်သွားရတာပေါ့.............ReplyDeletemr.guiltarAugust 21, 2011 at 8:25 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMr.JoeAugust 24, 2011 at 10:04 PMOne word : SHAMEReplyDeleteminarkueSeptember 7, 2011 at 5:02 PMbr ma ko m myin lite woo :SReplyDeleteAdd commentLoad more...